दुई वयस्क व्यक्तिबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्ध अब वैधानिकः भारतीय सर्वोच्च अदालत ! - Experience Best News from Nepal
दुई वयस्क व्यक्तिबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्ध अब वैधानिकः भारतीय सर्वोच्च अदालत !
भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै दुई वयस्क व्यक्तिबीच सहमतिमा हुने यौनसम्बन्धलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश रहेको बेन्चले समलिङ्गी यौनलाई अप्राकृतिक कसुर मान्ने सेक्सन ३ सय ७७ भनेर चिनिने पुरानो कानूनी प्रावधानलाई सर्वसम्मतिले अन्त्य गर्ने फैसला गरेको हो । टेलिभिजनमा उक्त सुनुवाइबारे खबर हेरिरहेका अभियानकर्मीहरूले फैसलाको समाचार आएलगत्तै खुसी प्रकट गरेका छन् ।
सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले पुरानो कानूनलाई नै सदर गर्ने गरी गरेको फैसलाको ती न्यायाधीशहरूले पुनरवलोकन गरिरहेका थिए । भारतका समलिङ्गी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले लामो समयदेखि पुरानो कानूनविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका थिए ।
यो फैसलासँगै अब व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्नेबारे अहिले केही भन्न नसकिने र सेक्सन ३ सय ७७ को केवल संवैधानिक वैधताबारे फैसला दिइएका न्यायाधीशहरूले स्पष्टरूपमा जनाएका छन् । उनीहरूले विवाह वा पैतृक सम्पत्तिजस्ता अधिकारको दृष्टिकोणबाट यसलाई नहेरेको बताएका छन् ।
यस कारण राख्छन मानिसहरु जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध ! जान्नुहोस्
जब ३७ हजार फीटमाथि उडिरहेको जहाजका पाइलटबीच नै हात हालाहाल भयो…
यस्ता छन् दाह्री–जुँगाका अहिलेका चलेका स्टाइल !
यसरी बोकेर ल्याइएको थियो नेपालमा पहिलो गाडी, (हेर्नुस् दुर्लभ ४ तस्बिरहरू)
कृत्रिम योनी बनेपछि युवतीले पाइन् नयाँ जीवन !